နယူးမက္ကစီကိုတွင် LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း - နယူးမက္ကစီကိုမှလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီ
နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
နယူးမက္ကစီကို - USA ။ တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ပထမနှစ်
သင်၏နိုင်ငံတကာမဟာဗျူဟာကိုစီစဉ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပေါင်းစည်းထားသည့်န်ဆောင်မှုများအပြင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၈ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အွန်လိုင်းအသုံးပြုခြင်းနယူးမက္ကစီကို - အမေရိကန်နိုင်ငံရှိသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ။
သင်၏မက္ကဆီကို - ယူအက်စ်အေတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Lifetime Customer Support ။
နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းမှု။
Package ကြေး - ဒေါ်လာ ၁၄၉
Package ကြေး $ 249
Package ကြေး $ 399
ထုတ်လုပ်သူသန်းပေါင်းများစွာသည်နယူးမက္ကစီကိုနှင့်နယူးမက္ကစီကိုနိုင်ငံများနှင့် ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များပေးသည်။
နယူးမက္ကစီကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်ကိရိယာအစုံအလင်ပါ ၀ င်ခြင်း (အမိန့်ပေးလျှင်) ။
နယူးမက္ကစီကိုနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ။
နယူးမက္ကစီကိုနှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၉ ခုအတွက်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုဘဏ်ငွေစာရင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ နယူးမက္ကစီကိုအတွက် Virtual နံပါတ်၊ နယူးမက္ကစီကို CRM solutions၊ နယူးမက္ကစီကိုနှင့်လူ ဦး ရေ ၁၀၉ ဦး အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်
ယနေ့သင်၏နယူးမက္ကဆီကို LLC အမည်ကိုရယူပါ။
သင်၏နယူးမက္ကစီကို LLC အမည်ကိုရှာပါ
နယူးမက္ကစီကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပိုင်ဆိုင်သည်။ Santa Fe သည်၎င်း၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၁၆ ရာစုတွင်နယူးမက္ကစီကိုဒေသကိုစပိန်ကအာမခံခဲ့သည်။ ၁၈၂၁ တွင်မက္ကဆီကိုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည် (ဂွာဒါလပ်ပီ Hidalgo စာချုပ်အရ) ။ နယူးမက္ကစီကိုစပိန်အမေရိကန် (ဟစ်စပါနို)၊ နယူးမက္ကဆီကိုနှင့်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့အကြားဖိအားပေးမှုများသည်ပြည်နယ်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ပြသည့်ပြင်းထန်သောရန်လိုမုန်းတီးမှုများ၏နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား strains N. Scott Momaday ၏အိမ် Made of Dawn (1821), Rudolfo Anaya ရဲ့ Bless Me, Ultima (1848), Leslie Marmon Silko ရဲ့အခမ်းအနား (1968) နှင့် John Nichols ၏ Milagro Beanfield စစ်ပွဲ (1972) ကဲ့သို့သောစာအုပ်များကိုမောင်းနှင်သည် အားလုံးအဆင့်မြင့်နယူးမက္ကဆီကန်အနုပညာထုံးစံများအတွက်အရေးကြီးသော။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်စီးပွားရေးအသစ်တစ်ခုကိုသင်စဉ်းစားနေသည့်အခွင့်အလမ်းတွင်ထိုအချိန်တွင်နယူးမက္ကစီကိုပြည်နယ်နှင့်၎င်း၏ကွန်ယက်များသည်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အကြီးအကဲများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအားအားကောင်းသောစေ့ဆော်မှုများကိုကမ်းလှမ်းနေသဖြင့်ထိုအရာသည်ထင်မြင်ချက်များကဲ့သို့သောအလုပ်များကိုဖန်တီးရန်အားပေးလိမ့်မည်။ စွမ်းအင်နှင့်သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ၊ အိုင်တီနှင့်ဒေတာစင်တာများသည်ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်လာကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများကညွှန်ပြအဖြစ်မက်လုံးပေးဖြေ - သင်ဟာ C ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်စေ၊ S ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်စေဖွဲ့စည်းသည်ဖြစ်စေ၊ သင်ရွေးချယ်တဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအပေါ်မှီခိုရမယ့်အားသာချက်အနည်းငယ်ရှိတယ်
လွတ်လပ်သောဘဝဖြေ - နယူးမက္ကစီကိုမှာနယူးမက္ကစီကို S ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်အဓိကအခွင့်အလမ်းကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဘ ၀ ကိုတန်ဖိုးထားမှာဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သေဆုံးခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းရှိမရှိမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူစီးပွားရေး element သည်အနှောင့်အယှက်မရှိလုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။
Pass-through အခွန်အကဲဖြတ်- အကယ်၍ နယူးမက္ကစီကိုတွင်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို S စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ပုံတင်လျှင်၊ မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ကိုမျှမထမ်းဆောင်ပါ။
အခွန်အကဲဖြတ်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နယူးမက္ကစီကိုတွင်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအား LLC အဖြစ်မှတ်ပုံတင်သောအခါအခွန်ကောက်ခံခြင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်တစ် ဦး တည်းပိုင်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ စီကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများကညွှန်ပြအဖြစ်မက်လုံးပေးဖြေ - အကယ်လို့သင်ကန့်သတ်ချက်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်၊ အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်တဲ့အားသာချက်တချို့နဲ့လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ပရိုဂရမ်တွေရှိတယ်။
- ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်း
- ဘီယာနှင့်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူများ၏ ဦး စားပေးအခွန်နှုန်းထား
- တက္ကဆက်ပြည်နယ် / နယူးမက္ကဆီကိုနယ်စပ်နေထိုင်သူများ၏အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်
ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားနယူးမက္ကဆီကို LLC ၏ပိုင်ရှင်သည်ကန့်သတ်ထားသောတာဝန်အာမခံချက်ကိုတန်ဖိုးထားရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
အထောက်အကူပြုသောစီးပွားရေးဝန်းကျင်ကိုထူထောင်ရန်တာ ၀ န်ယူနိုင်သောအကြောင်းအရင်းအချို့ရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်မတူညီသောစေ့ဆော်မှုနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆျောမှုအစီအစဉ်များအတွက်နယူးမက္ကစီကိုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုသည်ငွေတောင်းခံရန်လိုအပ်သည်။
US မှနယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့မှထောက်ပံ့သော - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
LLC သည် လီမိတက်တာဝန်ခံကုမ္ပဏီဟုလူသိများသည့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ရှိသည်။
S ကကော်ပိုရေးရှင်း S Corp မှလူသိများသောနယူးမက္ကစီကိုတွင်
ကို C ကော်ပိုရေးရှင်း C Corp. ဟုလည်းလူသိများသောနယူးမက္ကဆီကိုတွင်
နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် - နယူးမက္ကစီကိုဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုသို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
နယူးမက္ကစီကိုရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုတွင်ရှိသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ရုံးခန်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်စီးပွားရေးဝယ်ယူမှု၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိ virtual နံပါတ်၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်တရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ဘဏ္financialာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုမှ CRM Solutions၊ ကုန်သည်အကောင့်အသစ် နယူးမက္ကစီကိုသို့မဟုတ်ငွေပေးချေမှုရသောဂိတ်နယူးမက္ကစီကို, လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေး၊ လုံ့လဝီရိယရှိရှိနှင့်လိုက်နာမှု၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိအီးကောမတ်စ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ နယူးမက္ကစီကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။
နယူးမက္ကဆီကိုတွင်တည်ထောင်ပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက် - နယူးမက္ကစီကိုနှင့်နယူးမက္ကစီကိုမှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအဝင်နယူးမက္ကစီကိုနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးအဖြေများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးသည်။ နယူးမက္ကစီကိုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော HR ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်သင်၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုရှိရောင်းဝယ်မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုမှ virtual နံပါတ်များ၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်တိုးချဲ့ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်တရားဝင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင် CRM Solutions၊ ကုန်သည်များအကောင့်နှင့်နယူးမက္ကစီကိုငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ရှိသောအရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ နယူးမက္ကစီကို၊ နယူးမက္ကစီကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှု အလွန်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်အမည်ကိုမှနယူးမက္ကစီကိုအတွက် lockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
နယူးမက္ကစီကိုတွင် LLC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
နယူးမက္ကဆီကိုအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ နယူးမက္ကစီကိုအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာနယူးမက္ကစီကိုနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးပေးပြီး၊ ဖြေရှင်းမှုတွေကိုအဆုံးစွန်ပေးတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးသောသူတွေထဲက ၁ လို့ပြောတာမှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအတိုင်းအတာကြောင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ နယူးမက္ကစီကိုအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးသည်။
Package ကြေး LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏
ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားကိုရွေးပါ LLC သည် C-Corp S-corp အကျိုးအမြတ်မယူ
နယူးမက္ကစီကိုကြေး LLC သည်
စျေးနှုန်း $ 500
စျေးနှုန်း $ 699
စျေးနှုန်း $ 1000
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးစရိတ်မှစီးပွားရေးကိုသီးခြားစီ ✔ ✔ ✔
အဘို့အဆောင်းပါးများကိုပြင်ဆင် & file LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏
အဘို့အဆောင်းပါးများကိုပြင်ဆင် & file LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏ ✔ ✔ ✔
အမည်ရနိုင်မှုရှာဖွေရန် LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏
အမည်ရနိုင်မှုရှာဖွေရန် LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏ ✔ ✔ ✔
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှု LLC သည် ၁ နှစ်ပြည့်နယူးမက္ကစီကိုမှာ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှု LLC သည် ၁ နှစ်ပြည့်နယူးမက္ကစီကိုမှာ 1st နှစ်အတွက်အခမဲ့ 1st နှစ်အတွက်အခမဲ့ 1st နှစ်အတွက်အခမဲ့
setup ကိုစီးပွားရေးဘဏ်လုပ်ငန်းအကောင့် LLC သည် New Mexico ရှိသန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများအတွက်အထူးကမ်းလှမ်းချက် (ဒေါ်လာ ၄၅၀ တန်ဖိုး) လိုင်းသည်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်အတွက်လျှောက်ထားသင့်သည်။
setup ကိုစီးပွားရေးဘဏ်လုပ်ငန်းအကောင့် LLC သည် New Mexico ရှိသန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများအတွက်အထူးကမ်းလှမ်းချက် (ဒေါ်လာ ၄၅၀ တန်ဖိုး) လိုင်းသည်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန်အတွက်လျှောက်ထားသင့်သည်။ ✔ ✔ ✔
စည်းရုံးရေးမှူး၏ကြေငြာချက်နှင့်နှုတ်ထွက်စာ ✔ ✔ ✔
ဖုန်းနှင့်အီးမေးလ်အကန့်အသတ်မရှိပံ့ပိုးမှု ✔ ✔ ✔
ထည့်သွင်းခြင်းစာရွက်စာတမ်းများမှအွန်လိုင်း Access ကို
ထည့်သွင်းခြင်းစာရွက်စာတမ်းများမှအွန်လိုင်း Access ကို ✔ ✔ ✔
လာမည့်စီးပွားရေးနေ့ထုတ်ယူခြင်း ✔ ✔ ✔
အတွက်အလုပ်ရှင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် / အခွန် ID LLC သည် နယူးမက္ကစီကို (အမြင့်ဆုံးထောက်ခံချက်များ)
များအတွက်နည်းဥပဒေ LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏
အတွက်အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးမိနစ် LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏
များအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏
များအတွက်စံနယူးမက္ကစီကိုပြည်နယ်ဖိုင်မှတ်တမ်းအချိန် LLC သည် ၁၆ နေ့ရက်များ
များအတွက်စံနယူးမက္ကစီကိုပြည်နယ်ဖိုင်မှတ်တမ်းအချိန် LLC သည် ၁၆ နေ့ရက်များ ✔ ✔
များအတွက်နည်းဥပဒေ LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏ ✔ ✔ ✔
များအတွက်အီလက်ထရောနစ်ပေးပို့ LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၏ 16 စီးပွားရေးနေ့
များအတွက်အီလက်ထရောနစ်ပေးပို့ LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၏ 16 စီးပွားရေးနေ့ ✔ ✔ ✔
အဘို့အ Express ကိုသင်္ဘော LLC သည် နယူးမက္ကစီကို၏
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ နယူးမက္ကစီကိုမှာ Million Makers မှတဆင့်
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသင်မှတ်ပုံတင်လိုပါကနယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့မည်ပုံမှတ်ပုံတင်ရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်နယူးမက္ကစီကိုရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ နယူးမက္ကစီကို၏ဖောက်သည်များနှင့်နယူးမက္ကစီကိုအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူဖြစ်သောကြောင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်နယူးမက္ကစီကိုမှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည် နယူးမက္ကစီကိုကိုတည်ထောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပေါ့။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ နယူးမက္ကစီကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည့်သင်နှင့်သင့်မိသားစုအတွက်နယူးမက္ကစီကိုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုလည်းသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ လျှောက်ထားချင်တယ် နယူးမက္ကစီကိုနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
နယူးမက္ကဆီကိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ New Mexico ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် New Mexico .
နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှု၊ စာနာနားလည်မှု၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုဆိုင်ရာအချက်များနှင့်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားသောထပ်ခါတလဲလဲဖောက်သည်များနှင့်အတူတရားစီရင်မှုအားလုံးနီးပါးတွင်လုပ်ကိုင်သည်။
နယူးမက္ကစီကို၌ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရေးကိုယ်စားလှယ်များ၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များနှင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်မှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုသင်၏နယူးမက္ကစီကိုမှတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ နယူးမက္ကစီကိုန်ဆောင်မှု။
နယူးမက္ကစီကိုတွင် LLC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး မှပင် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်မှန်ကန်ပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်“ နယူးမက္ကစီကို၌အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုတတ်နိုင်သမျှစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
နယူးမက္ကဆီကိုရှိ LLC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှု / နယူးမက္ကစီကိုမှလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် -
New Mexico ရှိရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
နယူးမက္ကစီကိုမှနယူးမက္ကစီကိုတွင် LLC အဘို့အအသင်းမှ၏စာချွန်လွှာ & ဆောင်းပါးများ။
နယူးမက္ကစီကိုမှ LLC အတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုနယူးမက္ကစီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုစာအုပ်၏လီမိတက်။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောနယူးမက္ကစီကို / လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော LLC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ နယူးမက္ကစီကိုရှိနယူးမက္ကစီကို / လီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ရုံး, မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, နယူးမက္ကစီကိုနယူးမက္ကစီကို / လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီအတွက်။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်နယူးမက္ကစီကို / လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် LLC မှတ်ပုံတင်ဘို့လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ နယူးမက္ကစီကိုမှ LLC / နယူးမက္ကစီကိုရှိလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: နယူးမက္ကစီကိုတွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိပဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကခွင့်ပြုထားသည့်နယူးမက္ကစီကိုခွင့်ပြုချက်ပြုပါက Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်မက္ကဆီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုတွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအားဖြင့်သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်လောင်းကစား၊ လောင်းကစားခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုဘဏ်လုပ်ငန်း၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ နယူးမက္ကစီကိုတွင်၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိငွေလဲလှယ်ခြင်း၊
နယူးမက္ကစီကိုရှိ Crytocurrency လိုင်စင်၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ချထားမှုအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
နယူးမက္ကစီကိုနှင့်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၉ ခုအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ၅၀ အပါအ ၀ င်ကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်မှုအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်သူများသည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်သာမကနယူးမက္ကဆီကိုရှိ Professional CFA၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့ရှိဖောက်သည်များအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
နယူးမက္ကစီကိုရှိ Corporate Services | Santa Fe အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများ | Albuquerque အတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှု
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများ၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနယူးမက္ကစီကို နယူးမက္ကစီကိုတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုရှိကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအကြံပေးသူများ၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုတွင်ရှိသောကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကော်ပိုရေးရှင်းအတိုင်ပင်ခံများ၊
နယူးမက္ကစီကိုမှကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ | Santa Fe ရှိလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Albuquerque အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
နယူးမက္ကစီကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် New Mexico .
New Mexico ရှိ Accounts Outsourcing
သင်၏ကုမ္ပဏီကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်သင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို နယူးမက္ကစီကို၌တည်၏။
New Mexico ရှိရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး
HR အတိုင်ပင်ခံ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပေးထားသောသင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုဝန်ထုတ်။ နယူးမက္ကစီကိုတွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ နယူးမက္ကစီကိုတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နယူးမက္ကစီကိုနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းနယူးမက္ကစီကို၌ "
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ New Mexico .
နယူးမက္ကစီကိုအတွက် cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် နယူးမက္ကစီကိုမှကမ်းလွန်သို့မဟုတ်အီးယူတရားစီရင်မှုများအတွက်။
နယူးမက္ကစီကို CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ နယူးမက္ကစီကို၌ရှိသောသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ရှိသောအထောက်အပံ့များကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - နယူးမက္ကစီကိုအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် နယူးမက္ကစီကိုရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင်နယူးမက္ကစီကိုရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းမှုများနယူးမက္ကစီကိုလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်ထားမှု ၁ ခုသာရှိသောမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း New Mexico နယူးမက္ကစီကိုတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
နယူးမက္ကစီကိုအတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု New Mexico နယူးမက္ကစီကိုတွင် CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
နယူးမက္ကစီကိုမှာစိတ်ကြိုက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု | နယူးမက္ကစီကိုမှာစိတ်ကြိုက်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်မြန်ဆန်စွာပါဝင်မှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပါ ၀ င်သောတိကျသောဖြစ်စဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးလိုသောမည်သည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကိုမဆိုထည့်သွင်းရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအရာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းနယူးမက္ကစီကို၌ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို၊ LLC သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကို LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
နယူးမက္ကစီကိုတွင် LLC ထည့်သွင်းမှုအတွက်ပံ့ပိုးမှု | နယူးမက္ကစီကိုလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နယူးမက္ကစီကိုတွင် C-Corp ပါဝင်မှု နယူးမက္ကစီကိုတွင် C ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင် နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း | နယူးမက္ကစီကိုတွင် S-Corp ပါဝင်မှု နယူးမက္ကစီကိုတွင် S ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင် နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောပေါင်းစည်းမှု နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင် INC ဖွဲ့စည်းခြင်း | နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | နယူးမက္ကစီကိုတွင် OOO ပေါင်းစည်းမှု | နယူးမက္ကစီကို၌ SRL ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုလီမိတက်တာဝန်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိကမ်းလွန်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ရှိသောကမ်းလွန်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုလီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မက္ကစီကိုကမ်းလွန်လီမိတက်တာဝန်ယူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင် C-Corp ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိ C-Corp ကော်ပိုရေးရှင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကူညီသည်။ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန် C-Corp မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန် C-Corp မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် C-Corp ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မက္ကဆီကိုကမ်းလွန် C-Corp မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင် C ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင် C ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိ Offshore C ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်၊ မက္ကဆီကိုတွင်ကမ်းလွန်စီကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ပါဝင်မှု၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်စီကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်စီကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းပါဝင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင် S-Corp ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိ S-Corp ကော်ပိုရေးရှင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန် S-ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းတို့ဖြင့်ကူညီသည်။ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန် S-Corp မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန် S-Corp တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို S-Corp ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို S-Corp မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို S-Corp ကော်ပိုရေးရှင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် S-Corp ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မက္ကစီကိုကမ်းလွန် S-Corp တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင် S ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင် S ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန် S ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို၌, နယူးမက္ကစီကိုတွင် Offshore S ကော်ပိုရေးရှင်းပါဝင်မှု, ပေါင်းစည်းမှု, နယူးမက္ကစီကို S ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း, နယူးမက္ကစီကို S ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်, နယူးမက္ကစီကို S ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်, နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် S ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း, နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် S ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်အမြတ်အစွန်းမယူသောနယူးမက္ကစီကိုမှအမြတ်အစွန်းမယူသောနယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်အမြတ်အစွန်းမပါ ၀ င်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို၏ကမ်းလွန်အကျိုးအမြတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ပံ့သည်။ နယူးမက္ကစီကိုရှိကမ်းလွန်အကျိုးအမြတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကမ်းလွန်အကျိုးအမြတ်မယူသောပေါင်းစည်းမှု၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအမြတ်အစွန်းမဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအမြတ်အစွန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအကျိုးအမြတ်မယူသောပေါင်းစည်းမှု၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်အမြတ်အစွန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မက္ကစီကိုကမ်းလွန်အကျိုးအမြတ်မမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်အကျိုးအမြတ်မယူကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကမ်းလွန်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းပေါင်းစည်းခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင် INC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင် INC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင် INC ပါဝင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကမ်းလွန် INC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင် INC ပါဝင်မှု၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို INC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို INC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို INC ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် INC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် INC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းသည့်နိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းတို့နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကူညီသည်။ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မက္ကစီကိုကမ်းလွန်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိ OOO ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းနယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကမ်းလွန်အဖွင့်အဖွဲ့စည်း၊ နယူးမက္ကစီကို၊ နယူးမက္ကဆီကိုတွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအုပ္စုဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုအဖွင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကဆီကို၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများနှင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင် SRL ဖွဲ့စည်းမှုရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကမ်းလွန် SRL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို၊ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ရှိနယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည်တို့ကိုကူညီသည်။ နယူးမက္ကစီကိုတွင် SRL ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို SRL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကို SRL ပူးပေါင်းမှု၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် SRL ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန် SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
LLC ကိုနယူးမက္ကဆီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ နယူးမက္ကစီကိုမှလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် | နယူးမက္ကစီကိုတွင် C-Corp ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ နယူးမက္ကစီကိုတွင် C ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ရန်။ | ကော်ပိုရေးရှင်းကို New Mexico တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ New Mexico တွင် S-Corp ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ နယူးမက္ကဆီကိုရှိ S Corporation ကိုမှတ်ပုံတင်ပါ အကျိုးအမြတ်မယူသောနယူးမက္ကဆီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။ | အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းကိုမက္ကဆီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ INC ကိုနယူးမက္ကဆီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန် | နယူးမက္ကဆီကိုတွင် OOO မှတ်ပုံတင်ပါ နယူးမက္ကဆီကိုတွင် SRL မှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းမှထောက်ပံ့ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောမြို့များမှာ - Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Fe မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Santa Fe မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Fe မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Albuquerque မှကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Albuquerque မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Albuquerque မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Albuquerque မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Santa Fe တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Albuquerque တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနယူးမက္ကစီကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုအေးဂျင့်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များမှအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Santa Fe ရှိမြို့ကြီးများ၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များကိုထောက်ခံသည်။ Santa Fe ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Santa Fe ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Santa Fe ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Santa Fe ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Santa Fe ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Albuquerque ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Albuquerque ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Albuquerque ရှိ Albuquerque မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Albuquerque ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Albuquerque ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ Santa Fe တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Albuquerque တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ
နယူးမက္ကစီကိုမှတတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါသလား။
ဟုတ်တယ်နယူးမက္ကစီကိုတွင်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Santa Fe၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Santa Fe ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Santa Fe မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Santa Fe ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Santa Fe ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Albuquerque ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Albuquerque, Albuquerque မှ Albuquerque ၏ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Albuquerque ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Albuquerque ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Santa Fe တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Albuquerque တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်ရန်၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ရန်၊ , Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်၊ Santa Fe တွင် setup ကုမ္ပဏီ၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Albuquerque ရှိကုမ္ပဏီ၊ Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ပါ၊ Albuquerque တွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီ၊ Albuquerque တွင်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီ၊ Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ။ Santa Fe တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ Albuquerque တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတ ဦး ဖြစ်ပြီးနယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုနိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နယူးမက္ကစီကိုဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကုမ္ပဏီအားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Santa Fe တွင်နေထိုင်သူများ၊ Santa Fe တွင်နိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက် Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Albuquerque ရှိ Non-resident များအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Albuquerque တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်၊ Albuquerque တွင်နိုင်ငံခြားစာရင်းအတွက်ဘဏ်မှတ်ပုံတင်။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ New Mexico | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Santa Fe | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ Albuquerque
နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေးကုန်ကျစရိတ်နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်စရိတ်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခ၊ နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး၊ နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ကြေးခ၊ နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်, နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်နယူးမက္ကဆီကိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျမှုနယူးမက္ကဆီကိုတွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျသည်။
New Mexico ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Santa Fe ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Albuquerque ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
နယူးမက္ကစီကိုတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ Santa Fe တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို Albuquerque တွင်ထည့်သွင်းပါ
နယူးမက္ကစီကို၌ LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား နယူးမက္ကစီကိုလီမိတက်လီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင် C-Corp မှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင် C ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကဆီကိုရှိ S-Corp တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကဆီကိုရှိ S ကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောမှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင် INC မှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကိုပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကဆီကိုရှိ OOO မှတ်ပုံတင်ခြင်း နယူးမက္ကစီကို၌ SRL မှတ်ပုံတင်ခြင်း?
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ထည့်သွင်း LLC နယူးမက္ကစီကိုတွင်လီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသည့်ကုမ္ပဏီ နယူးမက္ကစီကိုတွင် C-Corp ကိုထည့်သွင်းပါ နယူးမက္ကစီကိုတွင် C ကိုကော်ပိုရေးရှင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင်ထည့်သွင်းကော်ပိုရေးရှင်း | နယူးမက္ကစီကိုတွင် S-Corp ကိုထည့်သွင်းပါ နယူးမက္ကစီကိုတွင် S ကော်ပိုရေးရှင်းထည့်သွင်းပါ နယူးမက္ကစီကိုတွင်အမြတ်အစွန်းမပါ ၀ င်ပါ နယူးမက္ကစီကိုတွင်အကျိုးအမြတ်မယူသောကော်ပိုရေးရှင်းကိုထည့်သွင်းပါ INC ကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်ထည့်သွင်း နယူးမက္ကစီကိုတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နယူးမက္ကစီကိုမှ OOO ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပါ နယူးမက္ကစီကိုတွင် SRL ထည့်သွင်းပါ
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation န်ဆောင်မှုများ | နယူးမက္ကဆီကိုရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ နယူးမက္ကစီကိုတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ
သင်၏အစုအဝေးကိုနယူးမက္ကစီကိုတွင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်းသို့မဟုတ်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
နယူးမက္ကစီကိုကုမ္ပဏီ၏ကုမ္မဏီပေါင်းစည်းခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောပမာဏနှင့်နယူးမက္ကစီကိုရှိအရည်အသွေးမြင့်မားသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကြောင့်နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကနယူးမက္ကဆီကိုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီထည့်သွင်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ နယူးမက္ကဆီကိုရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ | နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်စာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်နယူးမက္ကစီကိုအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများနှင့် Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးကူညီထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီးနယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွင့်လိုလျှင်၊ သင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်။
နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်နယူးမက္ကစီကိုတွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုတွင်တည်ထောင်ရန်န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ နယူးမက္ကစီကိုသည်နယူးမက္ကစီကိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်သည်၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့သည်၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်စန်တာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်။ Fe သည် Santa Fe ကုမ္ပဏီတွင်ဖွဲ့စည်းသည်၊ Santa Fe တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန် , Albuquerque တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်, Albuquerque အတွက်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်
နယူးမက္ကစီကိုတွင်အသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Santa Fe တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Albuquerque တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ပြည်နယ် ၀ န်ထမ်းအီးမေးလ်ရှာဖွေမှု
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး စီးဌာန
ပြည်သူ့လုံခြုံရေး ဦး စီးဌာန
အခွန်နှင့်အခွန် ဦး စီးဌာန
စွမ်းအင်တွင်းထွက်နှင့်သဘာ ၀ အရင်းအမြစ်ဌာန
ပတ်ဝန်းကျင် ဦး စီးဌာန
အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုဌာန - ပြည်နယ် ၀ ယ်ယူရေးဌာန
လူ့ ၀ န်ဆောင်မှုဌာန
စစ်ပြန် '' ဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်နယူးမက္ကဆီကိုရှိငွေကြေးခ ၀ ါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ဤကဲ့သို့သော Client များအားကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ New Mexico အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်တွေ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ၊ လက်နက်တွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ၊
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုမှသို့မဟုတ်သို့သွားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်စီအတွက်ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်းမရှိပါ။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုနယူးမက္ကစီကိုမှသို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ ကုမ္ပဏီများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်နယူးမက္ကစီကိုမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်သောသူများအတွက်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်၊ နယူးမက္ကစီကိုရှိနယူးမက္ကစီကိုမှကုမ္ပဏီများသို့စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ (s) ကိုထုတ်လုပ်, ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဖို့အသုံးပြုပစ္စည်းကိရိယာများ။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူ၊ တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုနယူးမက္ကစီကိုရှိ၊
●အစားထိုးမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုအတွင်းမှသို့မဟုတ်နယူးမက္ကစီကိုမှာရှိတဲ့လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုအပါအ ၀ င်မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီများအတွက်နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုနယူးမက္ကစီကိုမှ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်မပေးပါ။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေပြုနယူးမက္ကစီကိုအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်နယူးမက္ကစီကိုမှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်ရောက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။
●နယူးမက္ကစီကိုအတွက်ကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောလူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်နယူးမက္ကစီကိုမှ (သို့) နယူးယောက်သို့သွားသည်မဟုတ်ပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် New Mexico တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် New Mexico , New Mexico ဘဏ်အကောင့်, New Mexico ယုံကြည်မှု New Mexico ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု New Mexico ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ နယူးမက္ကစီကိုသည်
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-new-mexico/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းခဲ့သည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-new-mexico/